China Double Jersey Interlock Ukwaluka Machine Ukwakha futhi Factory | Imishini kaMorton
Umshini we-Double Jersey Interlock Knitting
Ngabe ufuna ukuthola ukukhiqizwa komshini we-Double Jersey Interlock Knitting ochwepheshe ngemfuneko yakho ethile yendwangu?
Singanikela nge-Higher Precision Double Jersey Interlock Knitting Machine ukufanisa isidingo sakho kangcono.
Umshini we-1.Double Jersey Interlock Knitting Usebenzisa indiza ye-aluminium alloy engxenyeni eyinhloko yomshini ukwenza ngcono ukushisa kokushisa kokushisa kanye nokunciphisa ukusonteka kwamandla kwebhokisi le-cam.
2.Double Jersey Interlock Ukwaluka Machine Usebenzisa One Stitch Ukulungiswa
Umshini we-4. Ngokushintsha nje ukuhleleka okuhle kwamakhamera, kungashintsha ukwakheka okuphindwe kabili bese kuhlangabezana nemakethe eguqukayo.
I-5.Ifakiwe njengokubukeka okuhle, isakhiwo esikahle futhi esisebenzayo.
6.Using efanayo umkhakha ephezulu izinto kanye amazwe CNC machining, ukuze uqiniseke ukusebenza izingxenye kanye nezindwangu izidingo.
Amagiya 7.Top futhi phansi zamukele design uwoyela-cwilisa ukuze kuncishiswe nemihuzuko igiya nomsindo, bese ngcono precision yabo futhi ukuphila.
Ukwamukela ifreyimu entsha eyenzelwe umshini, shayela i-cam box base nomkhono kunokufuduka ngasikhathi sinye ukuze kube lula kakhulu futhi kube lula ukulungisa ukubekezelelana kwenaliti kanye nemvume phakathi kwaphezulu ne-buttom.
Indwangu yendwangu esezingeni eliphakeme enezitayela ezahlukahlukene kufaka phakathi i-twill weave, ungqimba lomoya, isikhuseli sangaphakathi, inqwaba ye-foam, i-double surface mesh, ukotini we-mercerized nokunye kungenziwa ngenaliti elula noshintsho lwe-cam. Uma uyisebenzisa ngedivayisi ye-ruethane elastic fiber fiber OP, indwangu ebangeni eliphakeme yendoda nowesifazane esefashinini enjengendwangu yokunitha ephindwe kabili ingenziwa.
Langaphambilini Reverse Terry Isiyingi Ukwaluka Machine
Olandelayo: Ubambo Isiyingi Ukwaluka Machine